DAAWO sawirradii ugu dambeeyay ee garoonka diyaaradaha Kismaayo - Caasimada Online
Home Warar DAAWO sawirradii ugu dambeeyay ee garoonka diyaaradaha Kismaayo
DAAWO sawirradii ugu dambeeyay ee garoonka diyaaradaha Kismaayo
Kismaayo (Caasimada Online) Gaoonka diyaaradaha Kismaayo oo uu ka muuqdo dib u casriyeen aad u ballaan, ayaa sawirro cusub laga soo qaaday.
Garoonka oo dib u billaabay shaqadiisa tan iyo markii ciidanka Kenya ay qabsadeen magaalada Kismaayo labo sanno ka hor, ayaa hadda waxaa ka muuqda isbadal xooggan, waxaana maalin kasta ku soo dagga diyaarado fara badan.
Diyaaradaha qaar ee garoonka soo fadhiista waa ku ay la socdaan rakaab ka yimid Muqdisho iyo meelo kale oo gobalka, waxaa kaloo jirra dad kald oo ka yimaada waddamada caalamka kuwaasoo in muddo ah imaan Kismaayo.
Waxaa kaloo garoonka isticmaalka diyaaradaha u kireesan hey’addaha gargaarka iyo kuwa ciidanka AMISOM.
Haddaba akhristayaasha ku xiran Shabakadda Caasimada Online, waxaan u soo gudbineynaa sawirro ka turjumaay isbadalka garoonka diyaaradaha Kismaayo.